Xoghayaha Guud ee Rugta Saddexaad ee Ningbo Cijo debadda degdeg ah - Shiinaha Yuyao Hengwei tubbo haysa
April 25 subax, ee Xoghayaha Guud ee magaalada Ningbo si toos ah hoos Rugta Ganacsiga Alien Rugta Ganacsiga marti Quzhou salon saddexaad, lagu qabtay Rugta Ganacsiga shirkadaha xubin Quzhou, Quzhou dukaan kalluunka duurjoogta Siming Road.
Ka qaybqaado this Chamber Sharon Hangzhou iyo Wenzhou Rugta Ganacsiga, Rugta Ganacsiga, Heilongjiang, Anhui Rugta Ganacsiga, Rugta Ganacsiga, Shandong, Sichuan Rugta Ganacsiga, Rugta Quanzhou, Jiaxing Rugta Ganacsiga, Rugta Chizhou, Jinhua Rugta Ganacsiga, Rugta Ganacsiga iyo silig kale oo line cable ka badan 40 Xoghayaha Guud.
Sharon arrinta theme "sida in ay door, oo loox ee kormeerayaasha," Waxaan 沈培荣 doonaa Chizhou Chamber of Kormeerayaasha iyo Guddiga Kormeerayaasha Yerong Bin casuumay afhayeenka martida ah.
Marka dhamaadka salon ah, Quzhou Chamber of-xigeenka Xoghayaha Guud ee Ganacsiga Wang Qinghua dareen ahaan uga hadashay, waayo-aragnimo dheer laba kormeerayaasha barayaa tixraac aad u faa'iido badan, waxaa haboon waxbarashada. Guddiga Kormeerayaasha oo shuqulka qabto waa in la sameeyaa: First, ha Guddiga Kormeerayaasha ee Rugta Ganacsiga ee "Mid ka mid ah"; marka labaad Guddiga Kormeerka tahay inay tahay "rajo"; markaas Guddiga Kormeerayaasha wax wanaagsan ma samaynayno "cabsan." kartaa
Wasiirka Warshadaha iyo Ganacsiga waaxda xubin ka Ningbo Xu Xiaohua, Wasiirka ku xigeenka wasaaradda 李安奎 xubnaha sidoo kale waxaa lagu casuumay in ay ka qayb qaataan hawlaha. Xu Xiaohua, Wasiir Ku-xigeenka iyo Wasiirka salon ku 李安奎 siiyey rating sare, ka filan anshaxa la mid ah in mustaqbalka wax badan oo ka mid ah hawlaha waxtar leh, si ay u debadda shaqo cusub Rugta Ganacsiga.